सञ्जय पन्थी । गत विहिबार आफ्नै जन्मस्थान कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाको वडा (८) कार्यलय पुग्दा ‘अहिंसा कायरको हतियार हैन्’ गान्धी, वचन र वाणी को अनायसै पटक–पटक स्मरण भैरह्यो । गान्धीका यिनै शब्दको साहरामा मैले त्यहाँ अहिंसात्मक विचार र व्यवहारको परीक्षामा सामेल भैरहे । नागरिक त्यतिवेला सभ्य बन्न सक्छ, जब सत्य र अहिंसामा विश्वास गर्छ अनि चरित्र र व्यवहारमा अभ्यस्त हुन्छ । विधिको शासन र न्याय व्यवस्थामा सबै नागरिक राज्यका लागि समान र सामान्य नै हुन् ।
लोकतान्त्रिक राज्यको नजरमा नावालक, बृद्ध, महिला,पुरुष,दलित, गैर दलित सबैको अधिकार समान रहन्छ ।त्यसैले कसैले कसैलाई विशेष बुझ्न आवश्यक छैन् । अशक्त प्रति दया, दान क्षमा र करुणा प्रकट गर्नु मानविय गुण हुन् । न्याय, स्वतन्त्रता,समानता र समतामुलक समाज व्यवस्था नै लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । कर्तव्य विना पहुँच र हिंसा बलका आधारमा कसैलाई सम्मान गर्न आवश्यक छैन् । डाक्टर, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, जप्रतिनिधीकिसान, मजदुर सबैका लागि कर्तव्य, अधिकार र न्यायसमान नै हो । तर तह र तप्का अनुसार जिम्मेवारी फरक हुन सक्छ ।
प्रकृतिका लागि जीव र नागरिक सबै समान हौ, कोभिड महामारीले त्यसलाई पुष्टि पनि गरेको छ । करिब ३ करोड नागरिक भएको यस देशमा जति अधिकार अरुको छ, त्यत्ति मेरो पनि हो । जति मेरो छ, त्यत्ति अरुको पनि हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । अधिकारको प्रसंग चर्चा गरिरहँदा व्यक्ति स्वयँम समाजप्रति कति उत्तरदायी रह्यो ? प्रश्न उठ्न सक्छ । जवसम्म व्यक्तीले स्वयँम प्रकृति र समाजप्रति कर्तव्य प्रकट गर्न सक्दैन् । तवसम्म ऊ जिम्मेवार नागरिक बन्न सक्द्रन् ।
अधिकार भन्दा कर्तव्य पालना गर्नु सभ्यताको द्योतक हो । आफै प्रातडित भएर अर्काेको संवेदनशिलता प्रति सजग हुनु मानवियता हो । कर्तव्य प्रति सजग भैरहँदा यदि कसैले अस्त्र वा शस्त्र प्रहार गर्छ वा गरिरहन्छ, भने त्यतिवेला सत्यको साहरामा प्रतिकार वा प्रतिवादगर्न जो कसैलाई छुट हुन्छ । जुन धर्मग्रन्थ गीताको सन्देश पनि त्यही, हो ।
प्रसंग आफ्नै नगर कार्यलयमा पुग्दाको । मैले (लेट म्यारिज) विवाह गरे । विवाह गरेको पनि ३ वर्ष भैसके छ । उक्त विववाह लाई कानुनी रुपमा बैधता दिन स्थानिय नगरमा दर्ता गराउनु आवश्यक थियो । तर कारण वश अवसर जुरेको थिएन् । यस पटक घर पुग्दा त्यो अवसर जु¥यो । गत विहिबार र शुक्रबार वडा कार्यलयमा आफै उपस्थित रहे । मेरा लागि नगर वडाअध्यक्ष गुणानीधि भुसाल ज्यु सहयोगी बनिदिनु भयो । वहाँले म प्रति देखाएको सदाशयताले म आफुलाई नतमस्तक बनायो । वहाँ प्रति हृदयदेखि आभारी छु । नगरको वडा कार्यलय नयाँ भवनमा सरेको पहिलो दिन नै मैले पञ्जीकरण (विवाह दर्ता) गर्न पाउनुले म आफैलाई भाग्यमानी संझिए ।
भवनबाट कार्यलय उद्घाटन दिन भएकोले त्यहाँको दृश्य आफैमा चहल–पहल र उत्साह युक्त थियो । देशमा गणतन्त्रको भविष्य अदालतमा विचराधिन रहेको बखतमा उक्त नगरका नागरिकमा भने साँच्चै उत्साहीतदेखिन्थे । मैले पनि त्यो खुशी अनुभुत गरिरहे । तर कार्यलयमा उपस्थित रहीरहँदा कुनैबेला त्यही समाजमा हिंसात्मक र्दुव्यवहारको स्मरण पनि भैरह्यो ।
कार्यलयभित्र व्यस्त कर्मचारी र नागरिकको तछाड–मछाड देख्दा देशको अवस्था भनेर मनन् गरिरहे । आफ्नो कर्ममा तल्लिन रहँदा पनि कतिपय नागरिकले आफु भित्रको मात कर्मचारी माथि प्रकट गरिरहेका थिए । जुन व्यवहार आफैमा दुखद पनि थियो । त्यो दृश्यको साक्षी रहेकोले कार्यलयमा कार्यरत कर्मचारीसँग मैले यहीबाट एक पटक क्षमा माग्नु पर्छ । तपाईहरुको विनयशिलतालाई नागरिकले बुझ्न नसक्नु, हाम्रो समाजको अवस्था हो । साथै हिंसा पुज्य संस्कृतिको परिणाम पनि हो, भन्ने लाग्छ ।
व्यक्ति जति नै वैभवशाली र शिक्षित भएपनि सभ्य हुन्छ भन्ने छैन् । नागरिकले दिउसै मदिरा सेवन गरेर कार्यलयमा देखाउने रवाफ हिंसात्मक संस्कृतिको उपज हो । जुन दृश्य मैले त्यहाँ उपस्थित भैरहँदा देखिरहेको थिए । तर म आफै बोल्न सक्ने अवस्थामा थिएन् । किनकी अहिले पनि समाजमा हिंसा बल नै पुज्य छ, भन्ने मैले अनुभुत गरिरहे ।
एकै दिनमा हुनु पर्ने काम कारण वशदोस्रो दिन कार्यलय पुग्दा पनि मलाई रमाईलो अनुभुत लागि रहेको थियो । किनकी समाजको विभन्न तप्कासँग साक्षत्कार हुने अवसर प्राप्त भएको थियो । कसैले पनि मानविय संवेदना विर्सन मिल्दैन् ।कार्यलयमा साविकका सचिवको कारणवश अनुपस्थित रहँदा सचिवको हैसियतमा उक्त वडा कार्यलयमा उपस्थित भएर सहयोग पु¥याउने कार्यवाहक सचिव सन्तोष मगर मेरा लागि विशेष धन्यावद पात्र छन् । विनयशिलता कर्मचारीमा मात्र नभएर नागरिकमा पनि हुनुपर्छ । मैले बिनयशिलता प्रकट गर्न सके वा सकेन् तर वहाँले प्रकट गर्नु भयो । जिम्मेवारीसँगै कर्तव्य पालन आफैमा सभ्यता हो ।
०७४ को त्यो प्रताडना.....
वडा कार्यलयमा जनप्रतिनिधी र कर्मचारीबाट दुई दिनको उपस्थितीमा पाएको सहयोगस्मरणीय रह्यो । त्यसो त त्यही समाजमा पटक–पटक मैले म पेशागत मर्यादा निर्वाह (पत्रकारिता) गर्दा हिंसाबाटप्रातडित भएको विगत पनि छ । म भित्र त्यो हिंसाको क्षण पनि तरंगितभैरह्यो । केही अनुहार मेरा वरिपरि कुन नियतले हो, वरिपरि गरिरहे । उनीहरुको स्वतन्त्रता प्रति मैले शंका गर्न चाहन्न । मैले आफ्नै गाउँ पुग्दा ०७४ साल असारमा भएकोस्थानिय निर्वाचनका बखत विकासको नाटकको शसक्त विरोध गरेको थियो । त्यसो त निर्वाचनमा पनि त्यही हिंसामा विश्वास गर्ने शक्तिका कारण म मतदान गर्न पुग्न सकेको थिएन् । कारण निर्वाचन आचार संहिंता उल्ङघन गरेर विकास निर्माणको नाटक मञ्चन गरिरहेका वर्तमानमा अदालतबाट पुर्नस्थापित सदनका माननीय चक्रपाणी खनाल (बलदेव) ले लाखौ रुपियाँ खर्च गरेर विवादित वस्तीमा विकासको नाटक मञ्चन गरिरहेका थिए । उनी तत्कालिन समयमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्डका राजनैतिक सल्लाहकार थिए । त्यही पहँचका आधारमा उनले केन्द्रबाट ५ करोड रुपैयाँ जिल्लामा रकमान्तर गरी ल्याएका थिए ।
त्यो पैसा कार्यकर्तालाई खुशी बनाउन स्थानीय स्तरमा छद्म उपभोक्ता समिती गठन गरी अधिकत्तम २० लाख रुपैयाँ खर्च गरिरहेका थिए । उक्त कार्य अबैधानिक र गलत थियो । एक सचेत नागरिकको हैसियतमा उक्त कार्यको मैले विरोध गरे । हालको बानपा–८ बन्डौलीमा मेरो पुख्र्याेली सम्पत्ति पनि छ । त्यही सम्पत्ति हत्याउन (जग्गामा)सत्ता र हिंसाको साहरामा उन्मत्तहरु उक्त कार्यमा संलग्न थिए । खनालले निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सुकुम्वासी बस्तीमा भोटको राजनीति गरेको प्रष्टै बुझ्न सकिन्थ्यो । आचार संहिंताको उल्ङघन गर्दै उक्त बस्तीमा विकासका नाममा डोजर आतंक थियो । उक्त कार्यको मौखिक विरोध गरिरहँदा बाहुवलीको निशानाबाट बच्नु परेो थियो । उक्त गलत कामको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यलय कपिलवस्तुका तत्कालिन सिडियो विष्णु प्रसाद ढकाललाई र निर्वाचन आयोगलाई गर्नु परेको थियो । त्यति गरुन्जेल पनि यता विकासको नाटक मञ्चन रोकिएन् । बन्डौली गाँउको बन सिमानामा जर्वजस्ती बाटो बनाउन केही स्थानीय भुमाफिया र बाहुबलीहरु राजनैतिक आस्थाको खोल ओढेर सक्रिय रहे ।
तिनै बाहुबली मध्येका एक रहेछन्, सुवास विक (सल्यानी) नामधारीा युवक । उनी त्यस विकास नामको नाटकका मुख्य संयोजक रहेछन् । साथै नाम मात्रको उपभोक्ता समितीका अध्यक्ष उनी बनेका रहेछन् । त्यतिञ्जेल ती युवक को हुन् ? कहाँबाट आएका थिए?कुन आस्था राख्छन् मलाई थाह थिएन् । तर मैले पछि मात्र थाह पाए उनी शसस्त्र हिंसाका पक्षपाती बनेर त्यस बस्तीमा बस्दै आएका व्यक्ति रहेछन् । त्यसबखत स्थलगत उपस्थित डोजर आतंकको विरोध गर्दा , मानिस माथि नै डोजर नै चलाउने सम्म तयारी रहेको जानकारी हुन आएको थियो । उनलाई परिचालन गर्ने केही पेटी ठेकेदार पनि थिए । उनीहरुको नेता बलदेव खनालसँग आस्थाका आधारमा निकटत्तम समवन्ध रहेछ । तर यतिवेला ती ठेकदारहरुको राजनैतिकरुपमा बलदेवसँगकित्ता फरक परेको जानकार छु । तत्कालिन समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा मैले गरेको उजुरीमा नाम उल्लेख छन् । साथै अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा ०७४ असार ३० गते गरेको उजुरीमा पनि नाम उल्लेख छन् । अख्तियार यदि राजनीतिक दवावबाट मुक्त भए उक्त उजुरीमा अझै पनि छानविन गर्ने संभावना टरेको छैन् ।
उक्त विषयमा अख्तियारमा राजनैतिक पु¥याईयो । उक्त सन्र्दभआवश्यक परे अन्य समयमा व्यक्त गर्ने नै छु । प्रसंग फेरी नगर कार्यलय पुग्दा स्फुरित गान्धी वचन र वाणीको । तर यतिवेला उनै विक परिवारका सदस्य वाणगंगा नगर कार्यलयको वडास्तरका कर्मचारी नियुक्त गरिएका रहेछन् । नागरिकले तिरेको करबाट वेतन खाने गरी नियुक्त गराइएको रहेछ । उनै हिंसाका पक्षपाती विकलाई नगरका प्रशासनिक कार्य डिजिटलाईज गर्नेगरी नागरिकको व्यक्तिगत सुचना फारम भर्ने गरीएकाधिकार रुपमा जिम्मा दिएको रहेछ । स्वतन्त्र रुपमा व्यवसाय चलाउन जो कोहीलाई छुट छ । तर एकाधिकार हुनु मिलोमतो हो ।
सल्यान,दाङ हुदै कपिलवस्तु आईपुगेका ती युवकको हैसियतले त्यहाँ अधिपत्य गरिरहेका छन् ? तर त्यही नगरका रहीथाने थारु परिवार निरिह छन् । उनीहरुलाई नगर वा वडाले त्यही हैसियतमा अवसर नदिएको गुनासो पनि सुनियो । ढोडेकोल गाउँ निवासी एक स्थानियले भने थारु परिवारका सदस्यलाई वडाले रोजगारीको प्राथमिकतामा राखेन् । स्थानिय नेकपा कार्यकर्ताका अनुसार यतिवेला विकनेकपा (नेपाल,दाहाल) गुटका कपिलवस्तु जिल्ला सचिव विष्णु शाहको संरक्षकत्वमा सुरक्षित रहेछन् । शाह आफै कपिलवस्तुमा बलदेव खनालबाट संरक्षित व्यक्ति हुन् । त्यही निगाहमा राजनैतिक पद प्राप्त भएको हो ।
खनाल लडाकुको कमाण्डर, प्रमको राजनैतिक सल्लाहकार र मन्त्री बनेको अवगत नै छ । खनालले तत्कालिन समयमा ५ करोड रुपैयाँ जिल्लामा रकमान्तर गरेपछि उक्त रकमको वाँडफाँड गर्ने शाह नै भएको तत्कालिन समयमा एक स्थानिय ठेकदारले जानकारी गराएका थिए । तर उक्त रकमको हिसाव सरकारी कार्यलय (महालेखा कार्यलय) मा कही पनि भेटिदैन् ।
यति ठुलो संजालमा जोडिएका विक राजनैतिक समवन्धले जस्तो कर्म गर्न पनि पछि नपर्दा रहेछन् । साथै उनले आफु सुकुम्वासी दाबी गर्दै हालै सुकुम्वासी आयोगसम्म पहुँच पनि पु¥याएका रहेछन् । नगरले स्थानिय स्तरमा शुसासन प्रवाह गरिहँदा (डिजिटल सेवा प्रवाह गरिहँदा) स्वाभिमानी नागरिकको आस्थामा प्रहार त गरिरहेको छैन् ?विवादित छविका विकको विगतका कारण उनीद्धारा प्रवद्धित सेवा प्रवाहमा जान्न भन्न पाईने वा नपाईने ?विगतमा उनको हिंसात्मक कर्मबाट प्रातडित वडाका बासिन्दाको स्वतन्त्रताको सम्मान कस्ले गरिदिने ?उनी आफैमा बसाई सराई गरेर त्यहाँ आएका नागरिक हैनन् । उनी अहिले पनि सुकुम्वासी बनेर विवादित (व्यक्तिको मुद्धा चलिरहेको ) जग्गा हत्याउन राजनैतिक स्टन गरिरहेका छन् । उक्त बस्ती आफैमा कति सम्मानित वा बद्नामित छ, जनप्रतिनिधी ज्युलाई अवगत होला । जहाँ सुरक्षा निकायले पटक–पटक रातीमा छापा मारेको छ, मदिरा उत्पादन र विक्रि वितरणको विगविगी छ । बस्तीमा काठ तस्करी र बरामद भएको अभिलेख स्थानिय सुरक्षा निकायमा पक्कै हुनपर्छ ।
बसाई–सरार्ई विना सुकुम्वासी बस्तीमा बसेको नागरिकलाई कुन आधारमा नगरको मतदाता सुचीमा समावेश गरियो ?म आफै २० वर्षदेखि राजधानीको एउटै टोलमा बस्दै आएको छु । ललितपुर महानगरपालिकाका स्वतन्त्र निर्वाचित वडा प्रतिनिधी नरंिसह व्यञ्जनकार ४० वर्षदेखि निर्वाचित छन् । उनको टोलमा बसिरहँदा म स्वयँम मतदाता बन्न बैधानिकता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन् । मतदाता हुन नेपालको कानुन अनुसार घर कर वा लालपुर्जाको प्रमाण पत्र पेश गरे पछि मात्र जनप्रतिनीधिले सिफरिश गरेर मतदाता बनाउन सक्छ ।
त्यसैले जनप्रतिनिधि ज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ ?उनी कुन आधारमा त्यस बस्तीका मतदाता बने । उनको नागरिकता सल्यानबाट बनेको छ । सुकुम्वासी बनेर बस्दै आएका छन् । गाविसका पूर्व अध्यक्ष नेत्र गिरीले उक्त बस्ती त्यही वस्तीका पुराना पन्थी परिवारको भएको शिफरिश नै गरिदिएका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनैतिक आस्था मिल्यो भन्दैमा सबैलाई नागरिकलाई नागरिक बनाउन मिल्छ ? दक्षिणी सिमाका नागरिक त्यसरी नै ल्याएर बस्ती बसाउने अरु कसैले ग¥यो भने समाजको भविष्य के हुन्छ ?विक र विक जस्ता परिवार नेपाली हुन भन्दैमा नगरमा बस्ती बसाल्दै जाने हो, भने भुकम्प पिडीत गोरखा, सिन्धुली, काभ्रेजिल्लाका नागरिक पनि नेपाली हुन् । विक आफैमा दया देखाउन लायक बासिन्दा बन्न सकेनन् । ०७४ सालमा मानिस माथि नै डोजर चलाउन तम्सिएका व्यक्ति हुन् । त्यसको भुक्तभोगी स्वयँम म नै छु । उनको चारित्रिक पृष्ठभुमी केलाउँदा उनी हिसाबाट पोषित छन् । अहिले पनि उनले आफ्नो कर्मको प्रायश्चित गर्न सकेका छैनन् । उनले स्थानिय त्यस बस्तीमा पुराना बासिन्दालाई हिंसा बलमा अनेक दुःख कष्ट र प्रातडनादिएका थुप्रै उदाहरण अवगत हुन अएका छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा समेत उक्त नाममा उजुरी रहेको जानकारी हुन आएको छ ।
स्थानीय ढोडेकोलका बासिन्दाका अनुसार विकले हिंसात्मक द्धन्दकालिन समयमा स्थानिय बासिन्दा शिव पौडेल (अधिबक्ता चन्द्रमणी पौडेलका दाजु) को घर बनाउन स्वभाविक प्रक्रियाबाट फर्निचर बुटवल लैजादै गर्दा दुःख कष्ट पु¥याएका रहेछन् । माओवादी कै विद्रोही हैसियतमा वाणगंगा नदीको पुलबाट उनका फर्निचर कब्जामा लिएर रकम नै असुल गरेर खान सफल भएका रहेछन् । त्यसो त उनी अहिले जहाँ बसेका छन्, त्यस समुदायको सिचाई व्यवस्थाको नियम मिच्दै हिंसा बलकै आधारमा कुलो बनाएर मुहानबाट पानी कब्जा गर्न (चोरी गर्न ) उद्यत रहेछन् । विगत स्मरण गर्दै तत्कालिन बढघर घनश्याम भण्डारीले भने ‘गाउँको कुलाको मुहानबाटपानी कब्जा गर्न हिंसाको भय देखाएर स्थानीयलाई त्रस्त बनाईएको हो । धाक धम्की देखाउँदै गाउँबासीको सिंचाई व्यवस्थालाई दखल पु¥याउदै बनसिमा समेत मिचेर बसेको त्यस बस्तीमापानी दिन बाध्यपारियो ।’
यस्ता हिंसाका पक्षपातीले भविष्यमा त्यही समाजमा गर्न सक्ने हिंसा कर्मका बारेमा कति ध्यान दिईएको छ ?लोकतान्त्रिक संस्कार विना समाजमा शुसाशन कायम हुन सक्दैन् । विधि, पद्धती नपनाउँदा आज देश वेथिती गोलचक्करमा फसेको छ । त्यसरी नै नगर र वडामा पनि यावत समस्या व्याप्त छन् । चित्र र चरित्रमा ।
सत्यसाई केन्द्र अनुयायी एवंम भक्त राजधानीबासी, मुन्नी आचार्यले ‘कपिलवस्तुमा असल व्यक्ति भनेर स्मरण गर्दा गुणानिधी भुसाललाई स्मरण गर्छु ।’भनेकी थिईन् । उनी साईभक्त कर्मशिल नाराी हुन् । त्यसरी सम्मानित व्यक्तिको नजरमा अव्वल ठहरिएका भुसालजीले कुन स्वार्थ वा बाध्यताले हिसका हिमायती उनै विकलाई स्थानिय स्तरमा एक पछि अर्काै अवसर दिलाई रहनु भएको छ ?यदि कपिलवस्तुको कुनै नागरिक विकको पैत्रिक स्थल सल्यानको कुनै गाउँ वा नगरमा पुगेर त्यही शैलीमा ताण्डव कर्म गरेको भए अवस्था के हुन्थ्यो ?मेरो सवाललाई जात विशेषमा जोडेर नबुझियोस । हाम्रो परिवारमा जातभात र धर्मको कुनै विभेद् छैन् । सवाल प्रवृतीको हो ।सहनशिलता कसैको कमजोरी हैन् ।
विवादित र हिंसक पृष्ठभुमीका व्यक्तिलाई नगरका बासिन्दाको व्यक्तिगत सूचना दस्तावेजीकरणगर्न एकाधिकारदिईरहँदा भोली कतै दुरुपयोग भए त्यसको जिम्मेवारी कस्ले लिने ?स्थानिय निकायमा उनी बिरुद्धका सवालमा आवाज उठाउँदानागरिक निर्भयपूर्वक कार्यलयमा कसरी उपस्थित हुन सक्ने ?स्थानिय नागरिक एवंम अधिबक्ता रबि आचार्य भन्छन्, ‘विववादित व्यक्तिलाई नागरिकको व्यक्तिगत सुचनाको दस्तावेजीकरण गर्नु गराउनु नागरिक वा मतदाता प्रतिको धोखा हो ।’
नगरमा स्थानिय निकायका अन्र्तगतका अधिकांश कर्मचारी क्षमता र कार्यकुशलताका आधारमा भन्दा पनि मिलोमतो र भागवण्डामा नियुक्त गरिएका रहेछन । बाहिरी संरक्षकत्व रहेका र कर्तव्यपरायण कर्मचारी बीच भावभंगीमा नै फरक स्वभाव रहेछ । कतिपय त राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमसेर कार्यकालका सिंहदरवारका कारिन्दा भन्दा पनि गजक्क स्वभावका रहेछन् । सेवाग्राही बोल्न पनि डराउनु पर्ने । नगरमा कार्यकारी अधिकृत बनेर आएका सापकोटा थरका अधिकृतको भनाई उदृत गर्दै एक स्थानियले भने ‘यहाँको स्थानिय निकायका कर्मचारी नेताका परिवारका सदस्य हुन वा कर्मचारी छुट्टाउनै गाह्रो छ । उनीहरुलाई हामीजस्ता अधिकृतले काम अह्राउन वा खटाउनै सकस छ ।’ स्थानीय नेतृत्वसँग खटन पटन हुँदा उनी दुई महिनामा सरुवामा परेका रहेछन् । यस्तो अवस्थामा नगरले कसरी शुसासन प्रवाह गर्न सक्छ ? यस पटक नगरपालिका संघबाट सुशासनको अवार्ड पाउनुको रहस्य उजागर गर्दै, गाउँ पालिका महासँघका (काठमाण्डौंका) कार्यकारी अधिकृत विमल पोखरेललेभने, ‘कुनैबेला नगरको खर्चमा एक कार्यक्रममा भाग लिन अष्ट्रेलिया पुगेका मरासिनी थरका पूर्व अधिकृतको व्यक्तिगत समवन्ध र पहँचका आधारमा शुसासनको अवार्डले प्राप्त भएको हो ।’ नगर कसरी ठेकदार नियन्त्रित विकास धन्दामा केन्द्रित छ भनेर ?बुझ्न मधुवनधाम पुग्दा हुन्छ । जहाँ विश्पयना साधकहरुको ध्यान समेत भंग भैरहेको छ ।